Translate atadogña from Chamorro to Burmese - MyMemory
Results for atadogña translation from Chamorro to Burmese
YINEMBESTE y taelaye, ilegña gui corasonjo, taya minaañao as Yuus gui menan atadogña.
ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ရသောအကြောင်း သည် မတရားသောသူ၏ မျက်စိ၌မထင်ဟု၊ ထိုသူပြု တတ်သော ဒုစရိုက်ကို ငါထောက်၍ သဘောကျ၏။
Ya ayo na jaane sabado anae si Jesus jafatinas y fachae, ya jababa y atadogña sija.
အမိဝမ်းတွင်းကပင် မျက်စိကန်းသောသူကိုမျက်စိမြင်စေခြင်းငှါ တတ်နိုင်သည်ကို ကမ္ဘာဦးမှစ၍ မကြားစဖူး။
Ya anae mabendas y atadogña, mafaesen ilelegñija: Sangan; jaye jao munalamen?
မျက်နှာတော်ကိုဖုံးပြီးလျှင် လက်နှင့်ပုတ်လျက်၊ ကိုယ်တော်ကို အဘယ်သူပုတ်သည်ကို ပရောဖက်ပြု ၍ ဟောတော်မူပါဟုဆိုကြ၏။
Entonses japolo ya canaeña talo gui atadogña ya jaguefatan; ya jomlo, ya manlie claro todo.
နောက်တဖန်သူ၏မျက်စိပေါ်မှာ လက်တော်ကိုတင်၍ ကြည့်မျှော်စေတော်မူလျှင်၊ သူသည် ပကတိ အဖြစ်သို့ ရောက်၍ အလုံးစုံတို့ကို ရှင်းလင်းစွာမြင်လေ၏။
Pot este jaapaseyo si Jeova taemanoja y tininasso: taemanoja y guinasgas y canaejo gui menan atadogña.
ထိုကြောင့် ရှေ့တော်မှာထင်ရှားသော ငါ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ လက်စင်ကြယ်ခြင်းရှိသည်နှင့် အလျောက် ထာဝရဘုရားသည် ငါ၌ အကျိုးကို ပေးတော်မူပြီ။
Güiya unafanlibre y antiñija guinin y chiniguit yan y finijom: yan ugagaebale y jâgâñija gui menan atadogña.
သူတို့အသက်ကို လှည့်စားခြင်းနှင့်ညှဉ်းဆဲခြင်း၏ လက်မှ ရွေးနှုတ်၍၊ သူတို့အသွေးကို နှမြောတော်မူလိမ့် မည်။
Gui atadogña ninadespresiao ni y taotao áplacha, lao y maañao as Jeova jaonra: y manjula para dañoña namaesa ya ti jatolaeca.
ဆိုးယုတ်သောသူကို အယုတ်ဟူ၍ ထင်မှတ် လျက်၊ ထာဝရဘုရားအား ကြောက်ရွံ့သောသူကို ရိုသေ ထသော၊ ကိုယ်အကျိုးပျက်ရသော်လည်း ကိုယ်ကျိန်ဆို သော သစ္စာဂတိကိုမဖျက်၊
မရဏာနိုင်ငံ၌ ပြင်းပြစွာသောဝေဒနာကို ခံရလျက် မျှော်ကြည့်၍၊ အာဗြဟံကို၎င်း၊ အာဗြဟံ၏ ရင်ခွင်၌ လာဇရုကို၎င်း အဝေးကမြင်လျှင်၊
Ya si Saulo cajulo guinin y jilo oda; ya anae mababa y atadogña taya jalie, lao mamantiene canaeña, ya macone guato Damasco.
ရှောလုသည်လည်းမြေမှထ၍ မျက်စိကို ဖွင့်သော်လည်း အဘယ်သူကိုမျှမမြင်နိုင်သည်ဖြစ်၍၊ သူ၏လက်ကိုဆွဲလျက် ဒမာသက် မြို့သို့ပို့ဆောင်ကြ၏။
Güiya jagobiebietna ni y minetgotña para taejinecog: y atadogña pumupulan y nasion sija: ya munga y managuaguat na ujajatsa sija. Sila.
တန်ခိုးတော်အားဖြင့် အစဉ်အမြဲ အုပ်စိုးတော်မူ၏။ မျက်စိတော်သည် လူအမျိုးမျိုးတို့ကို ကြည့်ရှုသည် ဖြစ်၍၊ ငြင်းဆန်သောသူတို့သည် မဝါကြွားကြစေနှင့်။
ရွာအနားတွင် ပုန်းနေရာအရပ်မှာထိုင်၍၊ အပြစ်မရှိသော သူကို ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ သတ်တတ် ပါ၏။ ဆင်းရဲသောသူကို ချောင်းမြောင်းတတ်ပါ၏။
Si Jeova gaegue gui santos na temploña; si Jeova, y tronuña gaegue gui langet; y atadogña manlilie yan y babaliña jachachague y famaguon y taotao.
ထာဝရဘုရားသည် သန့်ရှင်းသော ဗိမာန် တော်၌ ရှိတော်မူ၏။ ထာဝရဘုရား၏ ပလ္လင်တော်သည် ကောင်းကင်ပေါ်မှာတည်၏။ မျက်စိတော်သည် ကြည့်ရှု ၍ မျက်ခမ်းတော်သည် လူသားတို့ကို စစ်တော်မူ၏။
Lao y publicano gaegue na tumotojgue gui chago; ya ti jaguesjatsa y atadogña julo gui langet; lao jaseseco y pechoña, ya ilelegña: Yuus, gaease nu guajo, sa taotao isaoyo.
အခွန်ခံမူကား၊ အဝေးကရပ်၍ ကောင်းကင်သို့မမျှော်မကြည့်ဝံ့ဘဲ ရင်ပတ်ကိုခက်လျက်၊ အို ဘုရားသခင်၊ အပြစ်များသော အကျွန်ုပ်ကို သနားခြင်းကရုဏာစိတ် ရှိတော်မူပါဟုဆုတောင်းလေ၏။
Lao ninafañuja as Pedro, ya dumimo ya manaetae; ya jabira güe guato gui tataotao, ya ilegña: Tabita, cajulo. Ya jababa y atadogña: ya anae jalie si Pedro matachong julo.
ပေတရုသည် ထိုသူအပေါင်းတို့ကို ပြင်သို့ထွက် စေသည်နောက်၊ ကိုယ်တိုင်ဒူးထောက်၍ ဆုတောင်း ပဌနာပြုပြီးလျှင်၊ ထိုအလောင်းသို့ မျက်နှာလှည့်၍၊ တဗိသ၊ ထလော့ဟုဆိုလေ၏။ ထိုမိန်းမ သည် မျက်စိကို ဖွင့်၍ ပေတရုကိုမြင်လျှင် ထ၍ထိုင်၏။
အဘယ်ကြောင့် မျက်စိမြင်သည်ကို၎င်း၊ အဘယ်သူသည်သူ၏ မျက်စိကိုဖွင့်သည်ကို၎င်း၊ အကျွန်ုပ်တို့ မသိကြပါ။ သူသည် အသက်ရွယ်နှင့်ပြည့်စုံပါ၏။ သူ့ကိုမေးကြပါလော့။ သူသည်ကိုယ်အကြောင်းကို ကိုယ် တိုင်ပြောပါလိမ့်မည်ဟု ပြန်ပြောကြ၏။
Ayo nae jamantiene y canae y bachet, ya jacone asta y jiyong y siuda; ya anae jatolae y atadogña, japolo y canaeña gui jiloña, ya jafaesen: Unlie jafa?
ကိုယ်တော်သည် လူကန်းကိုလက်ဆွဲ၍ မြို့ပြင်သို့ ထွက်ပြီးမှ၊ သူ၏မျက်စိကို တံထွေးနှင့်ထွေး၍ သူ့အပေါ်မှာ လက်တော်ကိုတင်လျက်၊ သင်သည် တစုံတခုကို မြင်သလောဟု မေးတော်မူ၏။
tuloy (Tagalog>English)poštovné (Czech>Romanian)deklaracja (Polish>Spanish)app khana kha liye (Hindi>English)iruka meaning (Tamil>English)помажет (Russian>Spanish)bangla sax video omanok (Bengali>English)google verðlaun (Icelandic>English)einlagensicherungsfonds (German>French)dyb (English>Arabic)tutto bene, tu (Italian>Portuguese)tracefilename (Italian>English)saxey video hindi (Hindi>English)hormoonontregeling (Dutch>Spanish)tumhare father kya kaam karte hai (Hindi>English)العرفاء (Arabic>Portuguese)puratchi meaning (English>Tamil)merci bon ami (French>Spanish)kahit gaano ka pa ka galit (Tagalog>English)adunan sebati (Malay>English)abcess (English>French)your dp was deepth sence (English>Hindi)فيديو سكس بنات صغار (Armenian>English)kiduttaminen (Finnish>Hebrew)urgent (English>Tagalog)